How to read/write japanese font in HuaweiC8650? — MYSTERY ZILLION
How to read/write japanese font in HuaweiC8650?
သိချင်တာ တစ်ခုရှိလို့ပါ။HuaweiC8650 CDMA 800MHz မှာ ဂျပန်ဖောင့် သွင်းချင်ပါတယ်။ အဖတ်ကော အရေးကောရချင်ပါတယ်။လက်ရှိ ဖုန်းမှာ မြန်မာစာ အရေး အဖတ် Myandroidနဲ့ ရနေပါတယ်။အဲဒါ ဆိုင်ကနေလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ Rootလုပ်ထားခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခု ဂျပန်ဖောင့် ကို ဘယ်ကနေရယူပြီး ဘယ်လိုသွင်းရမယ်ဆိုတာလေး သိရင်ပြောပြပေးပါ။
Try some software ....
ဒီ Simeji Keyboard ကိုတော့တော်တော်ညွှန်းကြတယ်ဗျ။ စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့။
အပေါ်က Simeji က color တွေနဲ့မျက်စိနောက်ရင်ဒီ Simeji Classic စမ်းကြည့်ပေါ့။ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။
Thank u so much Unkind,It is work!